Haweenka Ingiriiska oo doortay ragga cayilan bedelka kuwa murqaha waa weyn. - Hablaha Media Network
Haweenka Ingiriiska oo doortay ragga cayilan bedelka kuwa murqaha waa weyn.
HMN:-Jariirada Daily Mail ee kasoo baxda Ingiriiska ayaa faafisay in hablaha u dhashay dalkaan ey aad u jecelyihiin ragga cayilan bedelka kuwa muuqaalka qurxoon ee murqaha waaweyn dhistay.
Daily Mail waxey tilmaantay in 96% haweenku jecelyihiin iney nolosha la wadaagaan ragga cayilan, waxeyna sabab uga dhigeen diidmada ragga murqaha dhistay iney adagtahay in ragaan ey la wadaagaan cuntada oo ey mashquul ku yihiin goobaha jir dhiska sida GYM-ka iyo garoomada.
Cod bixin laga qaaday haweenka Ingiriiska oo ku saabsaneed mustaqbalka ragga ey jecelyihiin iney nolosha la wadaagayaan, ayaa dhamaantood waxey isku raaceen ineysan rabin ragga ku mashquulsan jir dhiska bedelkoodna ey doonayaan kuwa cayilan oo inta badan guriga jooga marka eysan shaqo jirin.